लकडाउनले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव – Chitwan Post
लकडाउनले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव
मानव इतिहासमा लेखिने गरी अहिले अर्को कोभिड–१९ को सङ्कट मानवका लागि थपिएको छ । यतिबेला विश्वकै शैक्षिक क्षेत्रले पनि अत्यन्तै विकराल र भयावह परिस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ । विश्वका १९२ देशहरुले राष्ट्रव्यापी र सात देशले स्थानीयरुपमा शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गरेका छन् । यतिबेला विश्वभर करिब १ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख ५७ हजार ८७० विद्यार्थीहरुको दैनिक पठनपाठन र नियमित परीक्षाको तालिका अवरूद्ध भएको छ । कुल विद्यार्थी संख्याको ९१.३५ अर्थात् १ अर्ब ५७ करोड ५२ लाख ७० हजार ५४ विद्यार्थीहरु राष्ट्रव्यापी विद्यालय बन्दको प्रभावमा परेका छन् भने बाँकी विद्यार्थीहरु स्थानीयरुपमा गरिएका बन्दको प्रभावमा परेका छन् ।
नेपाल पनि त्यसबाट अछूतो छैन । छिमेकी देश भारतमा बढ्दो दरमा संक्रमण र मृत्युको अवस्था तथा नेपालमा समेत संक्रमणको संख्या बढिरहेका कारण यो लम्बिन सक्ने सम्भावना रहेकै छ । यदि लकडाउन खुल्ला भइहाल्यो भने पनि एकातर्फ स्कुल÷कलेज सञ्चालन गर्न सकिहाल्ने त्रासमुक्त वातावरण निर्माण हुँदैन भने अर्कोतर्फ परीक्षाको तयारीमा रहेको यति ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरुलाई तोकिएको निश्चित परीक्षा केन्द्रहरुमा उपस्थित गराई परीक्षा सञ्चालन गर्नु अत्यन्तै जोखिमपूर्ण नै हुने देखिन्छ । संक्रमित मानिस उपचारपश्चात् सन्चो भई घर फर्किसकेको अवस्थामा समेत चीन अमेरिका, फ्रान्सलगायत देशहरुमा पुनः संक्रमण देखिनुले यो कोरोना भाइरस संक्रमण रोकिने अन्तिम डेटलाइन कहिलेसम्म हो भन्ने नै निश्चित छैन । आजसम्म भाइरस उत्पत्तिको कारण, यसको निर्मूलीकरणका लागि चाहिने औषधि निर्माण गर्नै सकिएको छैन । विभिन्न वैज्ञानिकहरु यस विषयमा खोज, अध्ययन र अनुसन्धानमै लागिपरिरहेका छन् ।
मानव समुदायले अझै लामै समय यो असहज परिस्थितिको गुलाम भएर रहनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । कोरोना भाइरसले अझै कति क्षति पु¥याउँछ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले, यो असहज र कठिन अवस्था अझै लामो समयसम्म रहिरहने खतरा रह्यो भने एसइई, कक्षा ११ र १२ तथा केही विश्वविद्यालयहरुको परीक्षाको अन्तिम तयारीमा रहेका करिब १५ लाख विद्यार्थीहरुको परीक्षाको सम्बन्धमा यो असामान्य घडीमा वैकल्पिक विधिहरुका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन सक्छ । सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु चैत १० गतेदेखि पूर्णरुपमा बन्द छन् । विद्यालय तहमा देशभरका सामुदायिक र निजी लगानीका कुल ३५ हजार ५५ वटा विद्यालयका ७२ लाख १४ हजार विद्यार्थीहरु र उच्च शिक्षाअन्तर्गत विभिन्न ११ विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतका एक हजार ४२५ कलेजमा अध्ययनरत ४ लाख ८६ हजार विद्यार्थीहरु आज घरमा थुनिएकै छन् ।
परीक्षाको स्थगन र अर्को तालिका प्रकाशित हुने अनिश्चितताका कारण एसइईको तयारीमा रहेका ४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ जना विद्यार्थीहरु अब के हुने हो भन्ने मनोवैज्ञानिक आतङ्कमा परेका छन् । त्यसैगरी, गत वैशाख ८ र २१ गतेदेखि सुरू हुने भनिएको कक्षा १२ र ११ को परीक्षाको अन्तिम तयारीमा रहेका कुल ९ लाख ६२ हजार विद्यार्थीहरु समेत परीक्षा स्थगित भएको सूचनासँगै बेचैन भएका छन् । सबै विश्वविद्यालयहरुका नियमित वार्षिक परीक्षाहरु रोकिएका छन्, जसका कारण परीक्षा तयारीमा रहेका हजारौँ विद्यार्थीहरु आफ्नो शैक्षिक भविष्य के हुने हो भन्ने मनोवैज्ञानिक दोधारमा परेका छन् । यस्तो बेलामा विद्यार्थीहरुलाई कसरी शैक्षिक क्रियाकलापहरुमा व्यस्त बनाइराख्ने भन्ने सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनु जरूरी हुन्छ । यसवर्षको शैक्षिक सत्र मिलान गर्ने काम पनि चुनौतीपूर्ण नै हुने देखिन्छ । नियमावलीमा शैक्षिक सत्र अवधि (दिन) किटान हुने व्यवस्था छ, पाठ्यक्रममा पाठ्यभार तथा क्रेडिट आवरको व्यवस्था छ, परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ । अब परिवर्तन हुने अवस्थालाई सम्बोधन गरेर काम गर्नका लागि यी सबैका बारेमा विधिवत् निर्णय चाहिन्छ । लकडाउन खुलेपछिमात्रै यस विषयमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, हाम्रो संस्कार अन्तमा हतारमा निर्णय गर्ने रहेको विगतको परम्परा कायम रहेमा अझ थप दबाब पर्न सक्छ । त्यही भएर अहिले नै विकल्पहरु बनाउनेतर्फ लाग्नु आवश्यक हुन्छ ।
अहिले कक्षा १० को अन्तिममा लिइने परीक्षाका बारेमा मात्रै धेरै चर्चा सुनिन्छ । आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा निकाल्ने धारणा पनि सुनिएका छन् । यसको तुलनामा त्यत्तिकै संख्यामा विद्यार्थी रहेका कक्षा ११, १२ र विश्वविद्यालयका परीक्षा कसरी गर्ने भनी छलफल र चर्चा सुनिन्न । त्यो तहका पनि त एउटै उमेर समूहका विद्यार्थी हुन्, त्रास उनमा पनि पक्कै छ । कि उनीहरुलाई पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा प्रमाणपत्र दिने भनिएको हो ? नेपाली समाजमा हिजोको एसएलसी र आजको एसइईको प्रभाव आँक्न मिल्दैन । कहिल्यै नपढ्ने बालबालिकाले पनि कम्तीमा सबै पुस्तकका पाना पल्टाउने पर्व हो एसइई । कहिल्यै बालबालिकाका लागि खर्च नगर्ने अभिभावकले पुस्तक किन्नदेखि अनेक पक्षमा लगानी गर्ने अवसर पनि हो । हामी कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनिरहे पनि आमबुझाइ त्यस्तो बनिसकेको छैन । निम्न वित्तीय परिवारका छोराछोरीको रोजगारीको ढोका पनि हो एसइई । यसलाई कमजोर बनाउने गरी कुनै निर्णय गर्नुहुँदैन ।
यसको ग्रेडिङ प्रणालीले ल्याएका समस्यालाई त सम्बोधन गर्न नसकेका बेला परीक्षाको विकल्प अरु केही पनि बनाउन हुँदैन । परीक्षालाई कमजोर बनाउनु पनि हुँदैन र समस्याको उचित समाधान पनि खोज्नुपर्छ । लकडाउन र अन्य प्रभावको आँकलन नगरीकन परीक्षा नै नलिनेजस्ता निर्णयले कसैलाई फाइदा पुग्दैन । लकडाउन हटाउनासाथ सबै काम यथावत्रुपमा गर्न पाइन्छ भन्ने होइन । यसले विभिन्न क्रियाकलापहरुलाई क्रमशः खुला गर्ने हुन सक्छ । पूर्णरुपमा विद्यालय सञ्चालनमा आउनका लागि लकडाउन खुला गरेपछि पनि केही समय लाग्छ नै । तसर्थ, हाम्रा कार्यहरु पनि सोहीबमोजिम तय गर्नुपर्छ । समस्याले नै समाधानको सम्भावना देखाउँछ । हालको परिस्थितिलाई सबैले बुझेकै छन् । यस्तो परिस्थितिमा बेलाबेला परीक्षाका कुरा उठाउनुभन्दा लकडाउन खुलेपछिमात्रै हुन्छ भन्ने धारणा बनाउनु र त्यस्तै सूचना एवम् समाचार सम्प्रेषण गर्नु राम्रो हुन्छ । परीक्षाको कुराले बाल मस्तिष्कमा ठूलो विचलन आउँछ । उनीहरु परीक्षा भई पो हाल्ने हो कि भनेर चिन्तामा परिरहन्छन् । यस्तो तनावपूर्ण वातावरणबाट विद्यार्थीलाई मुक्ति दिन केही हप्ता यी विषयहरु उठान नगर्दा राम्रो हुन्छ । हिजो एसइई रोकिएको सूचना सबै सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गर्दागर्दै पनि विद्यार्थी परीक्षा केन्द्रसम्म पुगेर वा मेरोचाहिँ परीक्षा छुटिहाल्ने हो कि भनेर केन्द्र घुमेको पनि देखियो ।
यस समस्यालाई दुर्गम पहाडी जिल्लाका बालबालिकालाई हेरेरमात्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यहाँ अभिभावकको आर्थिक मानसिक लगानीको कुरा पनि आउँछ । अझ परीक्षा भीडभाडबिना सम्भव छैन । यस विषयलाई अहिले बन्दाबन्दीसँगै बन्द गरेरै राख्नु उपयुक्त हुन्छ । सहज वातावरण बनेपछि परीक्षाका लागि कम्तीमा १५ दिन समय दिएर जसरी परीक्षा गर्दा सहज हुन्छ त्यसरी गर्दा हुन्छ । हतार गर्ने भनेको नतिजा निकाल्ने काममा हो । विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ हुने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भए पनि विद्यमान प्रचलन हेर्ने हो भने कक्षा १० उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र आधिकारिक र अन्य माथिल्लो तहका प्रमाणपत्रजत्तिकै मह¤वपूर्ण रहिआएको यथार्थ छ, जसको आधारमा विभिन्न निजी तथा सरकारी सेवामा प्रवेशको बाटो खुल्छ । कुनै खास परीक्षा नलिईकन आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रको वैधता यस्ता प्रयोजनमा के हुन्छ ? यदि कक्षा १० को अन्तिमको परीक्षा एसइई खारेज गर्ने हो भने लोकसेवा आयोगलगायत सबै क्षेत्रका विभिन्न सेवाका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यतालाई कक्षा १० वा सोसरह हटाएर कक्षा १२ उत्तीर्ण राख्नुप¥यो र जुनसुकै प्रयोजनका लागि प्रमाणपत्रहरु पेश गर्दा एसइईको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नु आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो ?
कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा पनि समस्या छ । राज्यले लिएको कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मान्ने नियमअनुसार १२ को परीक्षालाई एसइईभन्दा मर्र्यािदत बनाउन आवश्यक छ । समाजले जसरी बुझे पनि कक्षा १२ को परीक्षा एसइई वा हिजोको एसएलसीका मूल्यमा पुग्न आवश्यक छ । कक्षा ११ को हकमा कतिपयको कोर्स सक्नसमेत बाँकी भएको बुझिन्छ । यस्तो परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ का कारणले नयाँ शैक्षिक सत्र औपचारिकरुपमा तत्काल सुरू हुनेवाला छैन, यसर्थ विद्यालय तथा शिक्षकहरुले भिन्न माध्यमहरुबाट विद्यार्थीलाई घरमै पठनपाठनमा संलग्न हुन प्रेरित र सहयोग गर्दै वातावरण पनि तयार गर्नुपर्ने भएको छ । बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिने सवालमा राज्य संवेदनशील हुने र नागरिकहरुले पनि त्यत्तिकै चासो राख्दै क्रियाशील हुनुपर्ने भएको छ । स्थानीय सरकारहरुले विद्यालयसँग समन्वय गरेर औपचारिक तथा अनौपचारिक तरिकाले विद्यार्थीहरुसमक्ष विद्यालय पुग्ने रणनीति तय गर्नुपर्छ । विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई स्वअध्ययनमा संलग्न हुन प्रेरित र प्रशिक्षित पनि गर्न थाल्नुपर्छ ।
शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण सिकाइमा हामी भर्चुअल सिकाइ भन्दैछौँ । विश्वका धेरै देशहरुले पनि यो कठिन समयमा आफ्ना विद्यार्थीहरुसँग शैक्षिक सम्पर्क कमजोर नहोस् भन्नका लागि भर्चुअल कक्षाकोठा, अनलाइन क्लासमार्फत अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन् । किनकि, विकसित चेत भएका प्रायः सबै देशहरुले जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि शिक्षाको नियमिततालाई अत्यन्तै मह¤व दिएका हुन्छन् । अर्थतन्त्रलगायत अन्य क्षेत्रहरुको ग्याप वा असरहरु त २–४ वर्षको मेहनतबाट पुनस्र्थापित गर्न सकिएला । यसका लागि हामीसँग पूर्वाधार छन् त ? मुलुकका लगभग १० हजारजति सामुदायिक विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर छ । जम्मा १० हजार विद्यालयमध्ये १२ प्रतिशतजतिमा इन्टरनेट सुविधा छ र ३५ प्रतिशतजति विद्यालयमा बिजुली बत्तीको सुविधा छ भन्ने अनुमान छ । सामुदायिक विद्यालय पढ्ने बालबालिकाका अभिभावक न्यून आय भएका छन् । धेरै जना अर्काको घरमा काम गर्दै पढ्ने समूहका छन् । बिहान–बेलुका खान समस्या भएका अधिक परिवारका छन् । जब मुलुक भर्चुअल सिकाइतर्फ अगाडि त बढ्छ, तर यसमा पनि कमजोर र न्यून आय भएका वर्गले आर्थिक कारणले नै सोही मात्रामा लाभ लिन सक्दैनन् । यसबाट समाजमा वर्गविभाजनको दायरा अझ फराकिलो हुन सक्छ ।
कोभिड–१९ ले मानिसलाई आजमात्र नभएर भोलिका दिनका लागि पनि त्रासमै राखेको छ । जबसम्म यो त्रासलाई आशामा बदल्न सकिन्न तबसम्म हाम्रा आगामी दिन सहज बन्न कठिन छन् । लकडाउनभित्रका दिन त अझ तनावपूर्ण नै हुनेछन् । हुन त, यो समय अत्यन्तै असामान्य र विश्वव्यापी महामारीको अवस्था भएको र मुख्य विषय नागरिक स्वास्थ्यको सुरक्षा रहेको हुँदा अरु विषयहरु गौण हुनु स्वाभाविकै हो । मुलुकको सुखद भविष्यको जगका रुपमा रहेको शिक्षा प्रणालीलाई यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा समेत कसरी अद्यावधिक र नियमित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विद्यार्थी आन्दोलनबाट स्थापित अनुभवी र योग्य नेतृत्व रहेको शिक्षा मन्त्रालयले समयमै विशेष अग्रसरता देखाउनैपर्छ । सङ्कटले नै समाधान ल्याउने हो । यो अवस्था राज्यका लागि शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने अवसरको अवस्था पनि हो । यस अवसरलाई उपयोग गर्न सक्ने हो भने हाम्रो विद्यालयगत शिक्षा र उच्च शिक्षामा पनि आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौँ । राज्यले तोकेका मापदण्ड नभएका विद्यालयलाई एकीकृत गरेर मापदण्ड पु¥याउने, गुठीमा जान खोज्नेलाई गुठीमा लैजाने, व्यावसायिक विद्यालयलाई मापदण्ड पु¥याएर सञ्चालन गराउने, शुल्क निर्धारण र समायोजनमा जाने, विद्यालय सवारीको मापदण्ड तोक्ने, विद्यालय सवारीले विद्यार्थी बोक्ने दूरी निर्धारण गर्ने, विद्यार्थीको पोसाकमा एकरुपता ल्याउनेजस्ता बहुमुखी चर्चामा आएका तर कार्यान्वयन नभएका योजनाको उपयुक्त कार्यान्वयन गराउने बेला हो । यत्तिको स्वास्थ्य, आर्थिक र मानसिक मारपछि पनि हाम्रो शिक्षामा सुधार आएन वा ठोस नीति बनेन भने हामीले कहिल्यै सुधार गर्न सक्तैनौँ ।
सातदिने निःशुल्क सीप विकास कार्यक्रम